Tafatafa Niaraka Tamin’i Szabolcs Panyi, Tonian-dahatsoratry ny Global Voices Hongroà · Global Voices teny Malagasy
Tafatafa Niaraka Tamin'i Szabolcs Panyi, Tonian-dahatsoratry ny Global Voices Hongroà	Voadika ny 16 Janoary 2013 0:23 GMT
Zarao: Szabolcs Panyi, 26 taona, dia mpanoratra sy tonian-dahatsoratra ao aminà bilaogy Hongroà iray malaza, Véleményvezér (“Mpitari-kevitra”). Nanatevina laharana ny Global Voices amin'ny teny Hongroà izy tamin'ny Septambra 2011, ary hatramin'ny Martsa 2012 izy no lasa tonian-dahatsoratra mpanampy ato amin'ny tranonkala.
Global Voices: isan-taona ny Junior Prima Award [hu] dia atolotra ireo Hongroà tanora manana talenta. Mety hoe ianao ve no bilaogera voalohany nahazo azy io [hu] tamin'ny 2012?
Szabolcs Panyi: Eny, izaho no voalohany indrindra nahazo azy io amin'ny maha-bilaogera. Tena faran'izay zava-dehibe tokoa, tsy ho ahy irery ihany, fa koa ho an'ny bilaogy [hu], ary avy amin'izany dia mitatra ho amin'ireo mpanoratra hafa. Amin'ny lafiny iray, nahazo fankatoavana avy amin'ny alalan'io [fankasitrahana io] koa ny lanjan-toeran'ny bilaogy.
GV: Talohan'ny niarahanao tamin'ny Global Voices, natetika nitanisa ny Véleményvezér tao amin'ny vohikalantsika amin'ny teny Anglisy aho, satria ninoako fa fitaratry ny zavatra ataony ny anarany: bilaogy mpitari-kevitra ho an'ireo Hongroà mpamaky. Inona no fanalahidy hahatonga ny fanaovana bilaogy iray misahana raharaham-bahoaka ho malaza be?
SZP: Heveriko fatratra fa ny tena izy dia izahay miezaka manoratra lahatsoratra amin'ny fomba fanaon'ireo Anglo-Saxon, fohy ary voalanjalanja araka izay tratra. Ireo Hongroà mpitantana sy mpamoaka lahatsoratra am-bilaogy dia azo lazaina ho liana fatratra, mitanila ary mpanesoeso amin'ny fombany. Naniry zavatra hafa izahay. Tsy ny ho tonga aminà fifanarahana no tanjonay, fa ny mba hampisaina ny vahoaka. Kanefa nirona bebe kokoa nankany amin'ny fanakianana ny governemanta izahay taty aoriana, saingy niova ny politika Hongroà manontolo.
Szabolcs Panyi, bilaogera ao amin'ny Véleményvezér
Ny foto-kevitra [hoan'ny bilaogy] dia ny hanasongadinanay izay hetsika tena nanana ny lanjany indrindra tamin'ny andro iray nialohan'ny namoahana ny lahatsoratra, araka izany dia manampy mandrakariva indrindra indrindra ireo tsy dia manaraka akaiky ny resa-politika izahay mba hahitany tantara manana ny lanjany, ka tsy ilàn'izy ireo mitetitety zavatra maro. Fanampin'io, miara-miasa amin'ny Index [tranonkalam-baovao] koa izahay, ary tena manan-trosa valim-babena betsaka amin'ny Index sy ny Blog.hu [tolotra fitorahana bilaogy an'ny Index], satria ry zareo no manao doka ho anay ao amin'ny pejy voalohan-dry zareo, anivon'ireo votoaty izay an-dry zareo manokana, ary amin'io fomba io dia mandefa mpamaky maro mankany aminay ry zareo.
GV: Fantatrareo ve ny mpamaky anareo, azonareo an-tsaina ve hoe iza no mpamaky ny Véleményvezér?
SZP: Araka ny antontanisa ao amin'ny pejinay Facebook, saika lehilahy eo anelanelan'ny 25 sy 45 taona eo no ankamaroan'izy ireo, mponina ao Budapest [renivohitra]. Mazàna aho mifanena amin'olona izay miteny amiko fa hoe mamaky azy io ry zareo, ary dia mahafaly mandrakariva ny mandre izany. Vao haingana, ireo elanelam-panahy, ny very fanahy, ireo diso fanantenana avy amin'ny elatra havanana, ary mpanakiana hatry ny ela ny antoko mitondra vao tena betsaka nanomboka namaky anay. Saingy ireo tena itodihanay manokana dia ireo mitovy aminay, latsaky ny 45 taona, [olona ao anatin'ny faha] 20 sy 30 taonany, izay te-hahita an'i Hongria hanaraka ny fenitra Tandrefana sy hitazona ny fifandraisana tsara amin'ireo firenena Tandrefana mpiara-dia aminy, fa tsy ho ireo fitondràna mpanao didko fe-lehibe, satria isika ato anatin'ny ilan-tany Andrefana. Ary, mazava ho azy, [ireo izay maniry] ny governemanta mba hanaraka politika ara-toekarena azon'ny saina takarina sy manaraka ny zava-misy satria izany no mahatonga ny firenena hatanjaka. Ankehitriny, izany dia hilazàna ireo malefaka fihetsika avy amin'ny elatra havanana izay nanabe tarehy nitazana ireo hetsiky ny politika Hongroà nandritra ny fotoana naharitra.
Véleményvezér [“Mpitari-kevitra”] no anaranay satria ny tanjona dia tsy hoe fotsiny hanatratra olona betsaka, fa hanatratra ireo olona tena manana ny maha-izy azy izay manana ny toerany sy fahefana amin'ny fitarihan-kevitra, na eo amin'ny toeran'ny afaka mandray fanapahan-kevitra. Amin'ny famadihana an'io ho toy ny renivola, nandramanay ny nisarika ny sain'ny olona ho amin'ireo olana hitanay ho goavana, izany no mahatonga anay mijery be kokoa zavatra vitsivitsy noho izay hitan'ny be sy ny maro ho mavesa-danja kokoa – ohatra, mikasika ny lasan'ny sampam-pitsikilovana kaominista teto amin'ny firenena.
GV: Taminà fotoana sasany dia nanasa olo-malaza, mpanao gazety sy manampahaizana manokana ianareo haneho hevitra tamin'ny lahatsoratrareo. Inona no lamina narahanareo?
SZP: Navelanay ho azon'ny betsaka atao ny maneho hevitra, ny tsirairay dia afaka maneho hevitra amin'ireo lahatsoratray ao amin'ny Facebook [hu] amin'ny fampiasàna ny tena anarany, mahazatra anay ny mahazo fanehoan-kevitra 50-200 isaky ny lahatsoratra ao. Ao amin'ny bilaogy, 20-30 eo ny mpaneho hevitra omena fanasàna afaka maneho hevitra, saika mpahay toekarena, mpanao gazety, mpandalina ara-politika, mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo, na manampahaizana avy amin'ny sehatra samihafa, izay samy latsaky ny 45 taona avokoa sady nahavita zavatra misongadina isaky ny sehatra misy azy avy. Izy ireny no mety hoe mpamaky lafatra ho anay, ary izy ireny no tianay hatolotra koa ho an'ireo mpamaky anay ho toy ny olo-malaza izay mendrika ny hosoritana raha miohatra amin'ireo mpikirakira lahatsoratra miandraikitra lohahevitra voafaritra nefa efa manomboka mitontongana, antitra, izay nitombo nihalehibe tao anatin'ny sosialisma sady namerimberina zavatra mitovy foana hatramin'izany fotoana izany.
GV: Misy antony hafa ve andefasana ireo mpaneho hevitra ho any amin'ny Facebook?
SZP: Somary ambany ihany ny lentan'ny fanehoan-kevitry ny Hongroà, ary izahay nikatsaka fanehoan-kevitra misy kalitao ho an'ny tranokalanay, sy hampivoatra ny kalitaon'ny kolontsain'ny fifanakalozan-kevitra ao. Nahazo fanehoan-kevitra marobe tokoa izahay amin'ireo lahatsoratra, ndeha ho lazaina hoe maherin'ny arivo, ary mba hahitàna zavatra misy dikany, tsy maintsy mitsakaraka ny zavatra rehetra ianao, ao amin'izany ny votoaty tsy misy ilàna azy mihitsy, na mety ho ny votoaty sarobidy no very ao anatin'ireo [fanehoan-kevitra] tsy misy ilàna azy. Nefa amin'ny fanaovana io dingana io dia vitanay ny naka antoka mba ho isaky ny tranga tsirairay dia tombony manampy ny efa anànana ireo tsikera.
Ny ohatra farany akaiky indrindra dia fanehoan-kevitra iray avy amin'i Lászó Varró avy ao amin'ny International Energy Agency [Lehiben'ny Sampana Entona, Arintany ary Herinaratra], ary rehefa nasongadin'ny Index tao amin'ny pejy voalohan-dry zareo ilay fanehoan-kevitra, izay nisintona mpamaky 20.000 fanampiny ho any aminay. Noho ny fanànana izay fanehoankevitra nasongadina izay monja.
GV: Ao anaty lahatsoratrareo [hu] navoaka ho an'ny Andro Natokana ho an'ny Bilaogy, na “Blog Action Day” dia nanoratra ianareo hoe malalaka ireo bilaogera Hongroà, afaka mamoaka ny zavatra rehetra ry zareo. Mbola mino an'izay ve ianareo?
SZP: Eny, afaka mamoaka amin'ny fomba virtoaly ny zavatra rehetra ry zareo. Mazava loatra, misy ireo bilaogera miandany amin'ny antoko politikany, izay vatsian'ireo antoko politika amin'ny fomba samihafa ny bilaoginy, na izy ireo miara-miasa akaiky amin'ny politika. Hita mibaribary fa tsy manoratra mikasika ny zavatra hafa ry zareo na tsy miteny mandratra loatra eny fa na dia manakiana ny olon'izy ireo ihany aza, rehefa mampahafantatra sy manely ireo lohahevitra malaza amin'ny lafiny politikan'izy ireo.
GV: Raha afaka manoratra malalaka ireo bilaogera, azontsika ambara ve izany fa maka toerana mpanao gazety ry zareo raha hitarina kely?
SZP: Isika bilaogera dia afaka maneho hevitra haingana be sy afaka miasa tsy misy teritery amin'ireo tantara tiantsika ambara, raha ireo mpanao gazety mahonena ireo kosa, tsy maintsy mipetraka anaty efitrano famoaham-baovao ary [mamoaka ny vaovao] manenjika ora, ary mazàna ry zareo no tavela eo miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fahaiza-mamorona intsony sy ny tsy fisian'ny fotoana mba hanehoana ny hevitry ny tena manokana. Ao anatin'ny sokajin-tsehatra malalaka (ahafahana maneho hevitra ankoatra ny an'ny matoan-dahatsoratra) no andraisan'ireo bilaogera ny toeran'ny mpanao gazety raha itarina. Tsy misy tavela ireo mpikirakira zokiny, malaza, manan-kaja, raha lahatsoratra miandraikitra lohahevitra voafaritra no lazaina eto Hongria, ary efa nilaozan'ny toetr'andro ireo mbola tsikaritra eny rehetra eny, mamoaka any anatin'ireo gazety mpiseho isanandro ry zareo, araka izany tsy dia tena mamaky azy loatra ireo olona itodihanay.
Avy ankavia miankavanana: Emőke Kilin, Szabolcs Panyi, Tamás Novák, Kata Molnár, Nóra Netoleczky, Andrea Buzás, Andrea Höll, Diána Dobsinszki – mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny Global Voices Hongroà.
GV: Nahoana no zava-dehibe ho anareo ny nirotsahana ho mpirotsaka an-tsitrapo ato amin'ny Global Voices?
SZP: Mahaliana be ahy ny zava-mitranga any amin'ny tontolo Afovoany Atsinanana, Azia Afovoany ary ireo Firenena Andalam-pandrosoana miaina ampahany na anaty jadona tanteraka. Nandritra ny lohataona 2011, taminà fivahinianana ho an'ny bilaogera natao tany Alemana, dia nihaona tamin'ireo bilaogera avy any Tonizia, Indonezia, Mongolia sy toerana hafa aho, ary nanosika ahy ny fanananay asa mitovy atao, ao anatinà andian-taranaka iray ihany, ary ny fahasamihafàn'ny fiantraikan'ny fikirakiràna bilaogy ao Hongria sy any amin'ireny firenena ireny. Nitady ny fomba ahafahana miaro ny tolon'izy ireo any amin'ny fireneko aho, na farahafakeliny mba hisarika ny saina hijery azy ireny. Fomba tena tsara indrindra ho amin'izany ny Global Voices.
GV: Inona no fanamby goavana atrehan'ny tarika GV Hongroà?
SZP: Ny tena fanamby sarotra dia tsy mahaliana loatra an'ireo Hongroà mpamaky ireo lohahevitra avy any ivelan'ny sisintaninay, izay tsy misy ifandraisany mivantana amin'i Hongria, afa-tsy ireo lohahevitra mampientanentana tafiditra anaty sokajy ‘tabloid’. Ohatra, ny trangam-panolanana tany India no iray isan'ny lahatsoratray nalaza indrindra ary naverin'ireo tranonkala sasany navoaka tamin'ny endrika vaovao ‘tabloid’. Saingy betsaka ihany koa ireo namaky ny lahatsoratra momba ny nahafatesan'i Sattar Beheshti, Iraniana bilaogera, izay somagy nahagaga ahy ihany, nefa faly aho fa farafaharatsiny mba nandre mikasika io tantara mahatsiravina io ny teto Hongria. Indrisy, tena henjana be ny mahita mpamaky liana amin'ireo olana tahaka ny fahalalahan'ny fampiasana aterneto sy ny fahalalahana maneho hevitra ety anaty aterineto.
GV: Inona no lahatsoratra tena malaza indrindra na olana nadikan'ny Global Voices ho teny Hongroà?
SZP: Ho fanampin'ilay iray efa voalaza tetsy ambony, ny tena nalaza indrindra dia ny fandikànay ny raharaha Safarov – satria ireo izay nifandray tamin'i Hongria, tamin'ny namotsoran'ny governemanta noho ny resaka tombontsoa ara-toekarena an'i Azeri Ramil Safarov izay namono nahafaty Armeniana mpianatra tao Budapest. Taorian'ny namotsorana azy dia nahazo famelan-tsazy avy amin'ny lalàna Azeri ilay namono tamin'ny vely famaky, ary nankalazaina ho toy ny mahery fo – na ilay pejy Facebook tsy ofisialy an'ny filoha Azeri aza dia nosoloina ho ny sarin'i Safarov. Ireo fandikàn-teny dia milaza ity tantara ity, ary avy eo dia niely teny anaty fampahalalam-baovao anaty aterineto Hongroà izy io.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraMarietta Le
Tantaran'ny Eoropa Afovoany & Atsinanana farany 20 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaMihetsika Ny Kroaty Manoloana Ny Fanambaran'ny ISIS Ny Fanapahan-doha An'i Tomislav Salopek
21 ora izayOkrainaMpanakanto Okrainiana Manao Sariitatra Ny Fanagadrana Azy Tao Donetsk
1 andro izayOkrainaManangana Ady Ireo Fantsona TV Ao Okraina Noho Ny Fandrarany Ireo Fandaharana Rosiana Manao “Fampielezankevitra”
Vakio amin'ny teny Magyar, Français, Español, English
Eoropa Afovoany & AtsinananaHongria
Fahalalahàna mitenyHafanàm-po an-tseraseraMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaPolitika